1 Samuel 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
21 E mesịa, Devid batara Nọb+ wee bịakwute Ahimelek onye nchụàjà; Ahimelek+ malitere ịma jijiji mgbe o zutere Devid, o wee sị ya: “Gịnị mere naanị gị ji bịa, n’enweghị onye so gị?”+ 2 Devid wee gwa Ahimelek onye nchụàjà, sị: “O nwere ihe eze nyere m iwu ka m mee,+ ọ sịkwara m, ‘Ya adịla onye ọ bụla ga-ama ihe ọ bụla banyere ihe a m na-eziga gị nakwa banyere ihe a m nyere gị iwu ka i mee.’ Mụ na ụmụ okorobịa eyiwokwa agba na anyị ga-ezute n’ebe dị otú a na n’ebe dị otú a. 3 Ugbu a, ọ bụrụ na i nwere ogbe achịcha ise, nye m ha, ma ọ bụ ihe ọ bụla dịnụ.”+ 4 Ma onye nchụàjà ahụ zara Devid, sị: “Ọ dịghị achịcha nkịtị m nwere, kama e nwere achịcha dị nsọ;+ ọ bụrụhaala na ụmụ okorobịa ahụ emetụghị nwaanyị aka.”+ 5 Devid wee zaa onye nchụàjà ahụ wee sị ya: “Ma anyị emetụghị nwaanyị aka dị ka anyị na-adịghị emetụ ha aka ma m gawa agha,+ ahụ́ ụmụ okorobịa a na-adịkwa nsọ, ọ bụrụgodị na ọ bụ agha nkịtị ka anyị gara, ma ya fọdụzie taa ahụ́ mmadụ dị nsọ!” 6 Onye nchụàjà ahụ wee nye ya ihe dị nsọ,+ n’ihi na ọ dịghị achịcha dị n’ebe ahụ ma e wezụga achịcha a na-eche n’ihu Chineke, bụ́ nke e wepụrụ n’ihu Jehova+ ka e wee debe achịcha e mere ọhụrụ n’ebe ahụ n’ụbọchị e wepụrụ ya. 7 Otu n’ime ndị na-ejere Sọl ozi nọ n’ebe ahụ n’ụbọchị ahụ, bụ́ onye a na-ekweghị ka o si n’ihu Jehova pụọ,+ aha ya bụ Doeg+ onye Idọm,+ onyeisi nke ndị na-azụrụ Sọl atụrụ.+ 8 Devid wee sị Ahimelek: “Ọ́ dịghị ihe i nwere n’ebe a, ube ma ọ bụ mma agha? N’ihi na ewereghị m mma agha m, ewereghịkwa m ngwá agha m, n’ihi na ozi eze ziri m dị ngwa.” 9 Onye nchụàjà ahụ wee sị: “Mma agha Golayat+ onye Filistia ahụ i gburu na ndagwurugwu Ila+—lee ya n’azụ efọd,+ e ji ákwà mgbokwasị fụchie ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ya ka ị ga-ewere, were ya, n’ihi na ọ dịghị ọzọ dị n’ebe a ma e wezụga ya.” Devid wee sị: “Ọ dịghị nke dị ka ya. Nye m ya.” 10 Devid wee bilie gaa n’ihu gbawa ọsọ ọ na-agba+ n’ihi Sọl n’ụbọchị ahụ, e mesịa, ọ gbakwuuru Ekish eze Gat.+ 11 Ndị na-ejere Ekish ozi wee malite ịsị ya: “Onye a ọ́ bụghị Devid bụ́ eze+ ala ya? Ọ́ bụghị onye a ka ha nọ na-agbara egwú,+ na-agụ, sị,‘Sọl egbuwo puku kwuru puku,Devid egbuwokwa iri puku kwuru iri puku’?”+ 12 Devid wee malite itinye okwu ndị a n’obi ya, egwu+ wee tụọ ya nke ukwuu n’ihi Ekish eze Gat. 13 O wee mee onwe ya ka ọ dị ka onye isi na-adịghị mma+ n’ihu ha+ ma malite ime ka onye isi na-adịghị mma mgbe ha ji ya eji, na-akakasị ihe n’ibo ọnụ ụzọ ámá, na-emekwa ka ọnụ mmiri ya na-agụda ya n’ajị agba. 14 N’ikpeazụ, Ekish gwara ndị na-ejere ya ozi, sị: “Lee, unu hụrụ onye na-eme ka onye ara. Gịnị mere unu ji kpọtara m ya? 15 M̀ na-achọ ndị ara na-agba, mere unu ji kpọtara m onye a ka ọ na-emere m ka onye ara? Onye a ò kwesịrị ịbata n’ụlọ m?”